Naxdinta Haweenka ay ka qaadaan habeenka koobaad ee Arooska!!!! | shumis.net
Home » galmada » Naxdinta Haweenka ay ka qaadaan habeenka koobaad ee Arooska!!!!
Naxdinta Haweenka ay ka qaadaan habeenka koobaad ee Arooska!!!!
Inkastoo caado ay tahay in la is arooso hadana waxaa jira nidaam iyo garaad lagu dhaqmo xiliyada qaar taa oo labada dhinac ee isdoonaya ay ku go’aan qaataan ka hor arooska.
Haweenka ugubka ama guurka uu ku cusubyahay ayaa la sheegaa in ay naxdin ama shock ay ka qaadaan habeenka ugu horeeya ay aqalka tagaan ayadoona naxdintaasi lagu sifeeyay ama lagu macneeyay in tahay wareerka iyo aqoon la’aanta ay ka heystaan galmada, dalalka aduunka ayaa waxaa ka jira aqoon u gaar ah ka hor inta aanan la isguursan halka qaarkoodna ay leeyihiin iskuulo lagu dhigto ama lagu barto aqoonta Galmada Sexual Study.
Sexual study ayaa ah aqoon u gaar ah barashada Galmada waxaana sahlanaato in ay si fudud ay u wada dhaqmaan labada lamaane ee doonaya in ay wadaan nolol cusub waxaana dhacda hadii labada lamaane aysan laheyn qibrad dhanka Galmada ah ay ku adkaato in ay sii wataan noloshaasi macaan ee bilowga ah.
gaar ahaan haweenk ayaa naxdintaasi ka dib waxaa dhacda in ay si sahlan ula qabsato dhanka Galmada maadaama waxa ay yihin wax ku cusub maanka haweeneedaasi oo ah mid kaalin ka qaata hormarka Galmada cusub ee labada dhanac ee lamaanah ah.
Shock-ga dhanka Galmada ee ku dhaca haweeneeda habeenka koobaad ee Guurka ayaa la sheegaya in uu yahay ugu danbeyntii saameyn ku yeesha dhanka raaxada maadaama raaxada ay timaado ka dib marka ay is helaan labada xubin ee is -raadiska ka dhexeeya muda dheer waxaana dhacda mararka qaarkood in weeraarkaasi uu isku badal afgaran waa xal loo heli karo hadii aad tahay qabiir ama nin wax ka yaqaana dhanka Galmada.
Fadlan lasoo xidhiid hadii aad u baahantahay fikir ama talo ku saabsan Galmada ama Sexual-ka waxaad heli doontaa fikir iyo talo ku raala galisa
Title: Naxdinta Haweenka ay ka qaadaan habeenka koobaad ee Arooska!!!!